साना किसान विकास लघुवित्त : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, १९ जेठ २०७६)
गत आवको नाफाबाट २६ दशमलव ३१ प्रतिशत लाभांश दिएको साना किसान लघुवित्तले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्म रू. ३४ करोड ५९ लाख नाफा कमाएको छ । कम्पनीले गत आवमा रू. २ करोड ७८ लाख नाफा कमाएको थियो । कम्पनीले नाफा गत आवको तुलनामा चालू आवमा २४ प्रतिशत बढाएको हो । कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी गत आवको तुलनामा २२ प्रतिशत र सञ्चालन मुनाफा ६ प्रतिशत बढेपछि नाफा बढेको हो ।
तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी रू. ६५ करोड ४० लाख छ भने सञ्चालन मुनाफा रू. ४५ करोड ३२ लाख छ । कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव १५ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ५८ दशमलव ६९ रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २९४ दशमलव ९२ रहेको छ ।
2019-06-02 - 127 view(s) - abhiyan